PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - IYAVUTHWA INDLELA KA-PERCY TAU EBHEKE E-EUROPE
IYAVUTHWA INDLELA KA-PERCY TAU EBHEKE E-EUROPE
Ilanga - 2018-02-12 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
ABALANDELI beMamelodi Sundowns bangase bamubuke okokugcina egijima kule kilabhu uPercy Tau kule sizini njengoba kuvela ukuthi amaSandawana angase aqede konke luleli sonto nekilabhu yase-Europe emfuna uthuli.
UTau ube yiqhawe eshaya igoli elifake iSundowns kwi- last 16 yeNedbank Cup ihlula iCape Town All Stars ngo-1-0 ngoLwesihlanu ebusuku e-Athlone Stadium, eCape Town.
Lo mdlali odabuka esifundazweni iMpumalanga, uyinsika yeDowns njengoba enza ezibukwayo.
Sekukaningi kubikwa ukuthi kunamakilabhu amfunayo e-Europe.
Nokho leli phephandaba lithole ukuthi emuva komdlalo we-All Stars kunekilabhu yaseEurope exhumane neSundowns ngenhloso yokuthi kuqale izingxoxo zokumthenga kuleli sonto.
Kuthiwa akhona namanye amakilabhu amfunayo kodwa abengakasifaki isicelo, abesabuza nje ngaye.
UPitso “Jingles” Mosimane ocija iDowns, ukuqinisekisile ukuthi uTau uyafunwa e-Europe.
“Ngokubona kwami usekulungele ukuyodlala e-Europe. Uhlakaniphile, futhi uvuthiwe engqondweni. Akhona amakilabhu amfunayo e-Europe futhi kudala amgaqela. Nokho ngeke sixhamazele, konke kufanele kwenzeke ngendlela,” kusho uMosimane.
Naye uTau uzivumele ukuthi ulubalubela ukubhekana nenselelo yokuyodlala e-Europe.
“Kangiyena umuntu oxhamazelayo uma amehlo abantu ebheke kuyena, konke ngikwenza ngendlela. Nokho ngeke ngikufihle ukuthi ngikulangazelele ukuyozwa ukuthi kunjani e-Europe. Konke ngizokushiyela kwiSundowns, ngizozwa ngayo. Mina ngizoqhubeka nokusebenza kanzima,” kusho uTau.
NGUPERCY Tau weMamelodi Sundowns okuthiwa akusensuku zatshwala ajoyine enye yamakilabhu ase-Europe okuthiwa imfuna uthuli.